सिंगापुरको पहिलो भेटमा के खाए डोनाल्ड ट्रम्प र किम जोङले ! || सुनौलो नेपाल
सिंगापुरको पहिलो भेटमा के खाए डोनाल्ड ट्रम्प र किम जोङले !
सिङ्गापुर, २९ जेठ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबीचको विश्वले नै तीब्र रुपमा प्रतिक्षा गरेको शिखर वार्ता मङ्गलबार बिहान सिङ्गापुरमा सम्पन्न भएको छ ।
यतिमात्र होइन पहिलो भेटमा किम-ट्रम्पले के सम्झौता गर्छन् मात्रै होइन उनीहरुले कस्तो कपडा लगाए, कस्तो एक्सप्रेसन देखाए र के-के खानेकुरा खाए भन्ने बारेमा पनि धेरैलाई चासो छ । किम र ट्रम्पको भेटमा उनीहरुलाई खुवाउन सेफहरुले विशेष खानाको मेनु तयार गरेका थिए जसमा तीनथरी डेजर्ट समावेश छन् । हृवाइट हाउसले सार्वजनिक गरेको मेनुमा कोरियाली र पश्चिमी खानाको फ्युजन रहेको छ ।
सुरुमा उनीहरुलाई विशेषगरी मलाय प्रायद्वीपमा लोकपि्रय हरियो आँपबाट बन्ने ‘केराबु’ मा मह र ताजा अक्टोपस राखी सर्भ गरिएको थियो । त्यस्तै काँक्रोमा अरु विभिन्न चिज राखेर बनाइने कोरियाली खाना ‘ओइजोन’ को साथमा एभोकाडोको सलादसँग प्राउन ककटेल ट्रम्प र किमले खाए ।